2 Qarax Oo 32 Qof Ku Dilay Magaalada Homs
Qaraxa koowaad, ayaa ahaa qarax baabuur, waxaana kadib xigay qof naftiis hure ah oo isku qarxiyey meel ay dadisugu soo urureeen.
Koox la socota arrimaha xuquuqda aadanaha, ayaa shseegtay in ayada oo daadgureyn QM ay taageereyso ay socoto saddex magaalo oo ku yaalla Syria, ay laba qarax oo waa weyn maanta ka dhaceen magaalada afaraad.
Kooxda fadhiggeedu yahay Britain ee la socoshada xuquuqda aadanaha ee Syria, ayaa sheegtay in qaraxyada oo ka dhacay magaalada Homs ay dileen ugu yaraan 32 qof, ayna dhaawaceen ku dhowaad 100 qof oo kale.
Mas’uuliyiinta waxa ay sheegeen in qaraxa koowaad oo ka dhacay degmada al-Zahara uu ahaa qarax baabuur, waxaana kadib xigay qof naftiis hure ah oo isku qarxiyey meel ay isugu soo urureeen dad doonayay inay arkaan waxyeellada qaraxii koowaad.
Waxa uu ahaa weerarkii labaad oo weyn oo ka dhacay Homs tan iyo markii dhinacyada isku haya magaalada ay dhaqan-geliyeen xabbad joojin, horraantii bishan.
Islamarkaana, waxaa dalka Syria ka socoda daad gureynta shacabka ee saddex magaalo oo weyn, kadib heshiis bani aadannimo oo QM ay taageereyso oo ay gaareen dowladda iyo mucaaradka, bishii September.
In ka badan 250,000 oo qof ayaa lagu dilay Syria, waxaana ka barakacay 4 milyan oo qof, markii dagaallada dalkaas ay billowdeen sanaddii 2011.
Milatariga Dalka Ciraq Oo Baaraya Ramadi
Roxaani Oo Baaq U Diray Muslimiinta
Milatariga Ciraaq Oo 'Badi Qabsaday Ramadi'
Kenya: Al-Shabab oo Dilay Labo Booliis ah